अफगानिस्तानविरुद्ध कमजोर मानसिकता - खेलकुद - साप्ताहिक
अफगानिस्तानविरुद्ध कमजोर मानसिकता
केही वर्षअघिसम्म नेपालले क्रिकेटमा अफगानिस्तानलाई सजिलै हराउन सक्ने स्थिति थियो । त्यसयता नेपाली क्रिकेट जहाँ को, त्यहीं रह्यो बरु अझ कमजोर भयो । त्यसको ठीक उल्टो अफगानी क्रिकेटले ठूलो छलाङ मार्‍यो र आफ्नो खेलस्तरलाई अब्बल दर्जाको बनायो । अहिले स्थिति कस्तो छ भने नेपालले अफगानिस्तानको सामना गर्दा उसलाई हराउन नसकिने कमजोर मानसिकता देखिन थालेको छ । भर्खरै सम्पन्न आईसीसी यू–१९ विश्वकप छनौट यसैको एउटा उदाहरण थियो ।
सिंगापुरमा भएको छनौटको समाप्तिमा नेपालको यात्रा धेरै अर्थमा असफल रह्यो । असफलताको मापन रह्यो, आईसीसी यू–१९ विश्वकपमा छनौट हुन नसक्नु । अफगानिस्तान भने चार टिम सम्मिलित छनौट चरणको राउन्ड रोबिन लिगमा सबै खेल जितेर उक्त विश्वकपका लागि छनौट हुन सफल भएको छ । त्यसका लागि अफगानिस्तानले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्यो । युवा विश्वकप पनि भनिने यो प्रतियोगिता अर्को वर्ष न्युजिल्यान्डमा हुनेछ र त्यसमा नेपालको उपस्थिति रहने छैन ।
सन् २००० देखि २००८ सम्म नेपालले लगातार पाँच पटक युवा विश्वकप खेलेको थियो । त्यसयता नेपालले दुईपल्ट मात्र विश्वकपको यात्रा तय गरेको छ । विश्व क्रिकेटमा अफगानिस्तानको उदयपछि नेपाल उमेर समूहको यो क्रिकेटमा पनि कमजोर देखिन थालेको छ । अफगानिस्तान भने पछिल्ला आठ वर्षमा पाँचपल्ट विश्वकपका लागि छनौट भएको छ । युवा टिमको यस्तो प्रदर्शनले अफगानिस्तानलाई टेस्ट मान्यता दिने आईसीसीको निर्णय पनि सही देखिएको छ ।
प्रतियोगितामा नेपालले दुई खेल गुमाएको थियो र दुवै खेल अफगानिस्तानविरुद्ध खेलिएका थिए । दुवै खेलमा नेपालको प्रदर्शन निकै कमजोर रह्यो । अफगानिस्तान १२ अंकसहित शीर्षमा रह्यो भने नेपाल ८ अंकमा सीमित भयो । त्यसपछि क्रमश: सिंगापुर र मलेसिया रहे । यी दुवै टिमले एक–एक खेल जिते । यी दुवै टिमविरुद्ध नेपालले राम्रो खेले पनि त्यसको अर्थ रहेन् । यी दुवै टिमविरुद्ध नेपालको ब्याटिङ खासै प्रभावकारी देखिएन, जितको आधार बलिङ मात्र रह्यो ।
समग्र प्रतियोगिता अनि नेपालको प्रदर्शनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा तीन तहका टिम थिए । अफगान क्रिकेटको स्तर अरूको तुलनामा निकै माथि रहेको प्रस्ट भएको छ । अब युवा स्तरमा पनि अफगान क्रिकेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन । त्यसपछि नेपाल दोस्रो स्तरको टिम सावित भयो, जसले सिंगापुर र मलेसिया जस्ता टिमलाई हराउन त सक्छ तर अफगानिस्तान जस्तो टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छैन ।
यस अर्थमा नेपाली क्रिकेटका लागि यसपटकको युवा विश्वकपको छनौट यात्रा निराशाजनक रह्यो । यसमा दोष कसको त ? सम्भवत: यसमा खेलाडी एवं प्रशिक्षक विनोद दासको आलोचना गर्ने स्थान पनि कमै छ । नेपाली क्रिकेटमा लगातारको विवाद र यसकै कारणले प्रतियोगिता हुन नसक्दा घरेलु ढाँचा निकै कमजोर भएको छ । यू–१९ स्तरमा पनि क्रिकेट नभएको धेरै भैसकेको छ । कम्तीमा ५० ओभरको क्रिकेट यो उमेर समूहमा नभएको पनि तीन वर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ ।
यस्तोमा खेलाडी एवं प्रशिक्षकको मात्र आलोचना किन ? यसपटकको छनौटको यात्रा कस्तो रह्यो त ? यसको खास विश्लेषण प्रशिक्षक दास आपैंmले गरेका छन् । छनौट प्रतियोगिताको समाप्तिमा उनको प्रतिक्रिया थियो— हामीले यो विश्वकप छनौटका लागि कठिन मेहनत त गरेका थियौं, तर त्यो पर्याप्त रहेन । यसमा हामीलाई दु:ख छ । अफगानिस्तान योग्य टिम हो र योग्यले नै युवा विश्वकपको यात्रा गरेको छ । नेपाली क्रिकेट अझै यस्तै स्थितिमा रहने हो भने हाम्रा लागि आउने दिन थप कठिन हुने निश्चित छ ।